တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ မူလတန်းကျောင်းပေါင်း ၂၆ဝဝဝ ကျော်တွင် မူလတန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ လိုအပ်နေသည့် ကေ?? - Yangon Media Group
တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ မူလတန်းကျောင်းပေါင်း ၂၆ဝဝဝ ကျော်တွင် မူလတန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ လိုအပ်နေသည့် ကေ??
တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် မူလတန်း ကျောင်းပေါင်း ၂၆ဝဝဝ ကျော်တွင် မူလတန်းပြလိုအပ်နေသော ကျောင်းပေါင်း ၆ဝဝဝ နီးပါးရှိ နေကြောင်း သိရသည်။ ယခုပညာသင်နှစ်တွင် အခြေခံပညာဦးစီးဌာနလက် အောက်ရှိ ကျောင်းများဖြစ်သော မူလတန်းကျောင်း ၂၆၉၁၈ ကျောင်းတွင် မူလတန်းပြဆရာ၊ ဆရာမလိုအပ်နေသောကျောင်းမှာ ၅၉၆၅ ကျောင်းရှိနေကြောင်း၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှသတ်မှတ် ထားသော ကျောင်းအကွာအဝေး A,B,C,D,E သတ်မှတ်ချက်အရ D အဆင့်ရှိသောကျောင်းများ တွင် ပိုမိုလိုအပ်နေသောကျောင်း မှာ အများဆုံးဖြစ်ကြောင်း၊ အဆို ပါကျောင်းများတွင် မူလတန်းပြ ဆရာ ၂၇ဝဝ ကျော် လိုအပ်နေ ကြောင်း အခြေခံပညာဦးစီးဌာန မှ သိရသည်။
”အရင်က နေ့စားခေါ်တယ်။ အခုနောက်ပိုင်းမခေါ်တော့ အ ရေအတွက်အရ လျော့သွားတာပေါ့။ နေ့စားတွေကို ပြန်ခေါ်မယ်ဆိုရင် အရင်လိုတိုက်ရိုက်ခန့်ထားတာ မလုပ်တော့ဘဲ ရက်တိုသင်တန်း ပေးပြီး ခန့်ထားနိုင်မယ်ဆိုရင် လိုအပ်ချက်ကိုလျှော့ချနိုင်မှာပါ”ဟု အခြေခံပညာဦးစီးဌာနမှ အရာရှိတစ်ဦးက ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက်က ပြောကြားသည်။
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အကွာအဝေးသတ်မှတ်ချက် ဖြစ် သော အဝေးဆုံးဒေသ E အဆင့် ရှိကျောင်းများသည် ဒုတိယဦးစား ပေးအနေဖြင့် အလိုအပ်ဆုံးဒေသ များဖြစ်နေကြောင်း၊ လိုအပ်နေသည့်အရေအတွက်မှာ ဆရာဦး ရေ ၁၄ဝဝ ကျော်ဖြစ်ကြောင်း၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်အလိုက် အနီးအဝေးအလိုက် မူလတန်းပြ အလိုအပ်ဆုံးဒေသမှာ ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး မြို့ပေါ်ကျောင်း များမှာ အလိုအပ်ဆုံးဖြစ်ကြောင်း၊ E အဆင့်ရှိလိုသောကျောင်းများ မှာ ကရင်၊ ချင်း၊ စစ်ကိုင်း၊ ရခိုင်နှင့် ရှမ်း (အရှေ့၊ တောင်၊ မြောက်) ရှိကျောင်းများတွင် အလိုအပ်ဆုံး ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အကွာအဝေး D အဆင့်ရှိ ကျောင်းများတွင် မူလတန်းပြ ဆရာ အလိုအပ်ဆုံးဒေသများမှာ ရခိုင်၊ ရှမ်း(တောင်)၊ ရှမ်း(မြောက်)နှင့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတို့ ဖြစ်ပြီး ကျန်တိုင်းဒေသကြီးပြည် နယ်များမှာမျှခြေအနေအထားရှိ ပြီး အနီးအဝေးဖြင့်ပြန်လည်တိုင်း တာပါက ပိုမိုဝေးကွာသောကျောင်း များတွင် လိုအပ်ချက်ရှိနေဆဲဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အရ A,B အဆင့် ကျောင်းများသည် မြို့ပေါ်ရှိကျောင်းများဖြစ်ပြီး C အဆင့်ကျောင်းများသည် မြို့ပေါ်မှ တစ်နာရီခန့်သွားရသည့် ကျောင်း များဖြစ်ကြောင်း၊ D အဆင့်ကျောင်း များသည် နေ့ချင်းပြန်သွားရသော ကျောင်းများဖြစ်ပြီး E အဆင့် ကျောင်းများမှာ သွားလာရခက်ခဲ သည့်ဒေသမှ ကျောင်းများဖြစ်သည်။
အလှည့်ကျ ကျင်းပနေသည့် တရုတ်-မြန်မာ ကုန်စည်ပြပွဲများတွင် အင်တာနက်မှတစ်ဆင့် ရောင်းဝယ်မှု E-commerce
စည်းကမ်းချိုးဖောက်မှုကြောင့် ဒမ်ဘီလီ ပေါင် ၉ဝဝဝဝ ဒဏ်ရိုက်ခံရ
ဂျပန်တွင် စံချိန်တင်အပူချိန်ကြောင့် သေဆုံးသူ ၆၅ ဦးရှိလာ
ပြည်တွင်းတွင် စက်သုံးဆီများကို လက်ဝါးကြီးအုပ်၊လက်ဝါးချင်း ရိုက်ရောင်းချနေခြင်းမဟုတ်၊ လက??